अलैंचीको मूल्य प्रतिमन ३२ देखि ३५ हजारसम्म - कृषि डेली
Home नगदेवाली अलैंचीको मूल्य प्रतिमन ३२ देखि ३५ हजारसम्म
ताप्लेजुङ। ताप्लेजुङमा गत हप्तादेखि नयाँ मूल्यमा अलैंची खरीदविक्री शुरू भएको छ । अलैंचीको नयाँ उत्पादन बजारमा आउन थालेसँगै कारोबार मूल्य गतवर्षको भन्दा धेरै रहेकाले किसान तथा व्यवसायी उत्साहित छन् । पछिल्ला केही वर्षयता अलैंचीको मूल्य निरन्तर घटिरहेको अवस्थामा यस वर्ष शुरूमै सोचेभन्दा राम्रो मूल्य आएको बताइएको छ । केही हप्ता अघिदेखि स्थानीय बजारमा निस्कन थालेको अलैंचीको मूल्य प्रतिमन रू. ३२ हजारदेखि ३५ हजारसम्ममा खरीदविक्री भइरहेको छ ।
हाल स्थानीय बजारमा कारोबार हुन थालेको मूल्य अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो भएकाले अलैंची किसान तथा व्यवसायी दुवैलाई उत्साहित बनाएको छ । जिल्लाकै प्रमुख नगदेबालीको रूपमा रहेको अलैंचीको नयाँ मूल्य गतवर्षको भन्दा यस वर्ष रू. १२ हजारदेखि १४ हजारसम्म बढी रहेको सदरमुकाम फुङ्लिङ बजारका स्थानीय व्यवसायी दिनेश अधिकारीले बताए । उनका अनुसार गतवर्ष नयाँ अलैंची बजारमा कारोबार हुन थाल्दा प्रतिमन रू. २० हजारदेखि २२ हजार मात्र मूल्य थियो । यस वर्ष शुरूमा आएको अलैंचीको मूल्यले किसान तथा व्यवसायी दुवैलाई सन्तुष्ट बनाएको उनको भनाइ छ ।
यता, यस वर्ष अलैंची उत्पादन भने ह्वात्तै घटेको किसानले बताएका छन् । अहिले औल क्षेत्रको अलैंची निस्कन थालेको र औल क्षेत्रमा विगतको तुलनामा आधाभन्दा धेरै उत्पादन घटेको फुङ्लिङ नगरपालिका–१ का किसान मकरजङ लिम्बूले बताए । उनका अनुसार यस वर्ष औल क्षेत्रमा सबैतिर अलैंची नफलेकाले उत्पादन घटेको छ । लेकाली क्षेत्रमा भने अलैंची फल राम्रै लागेको किसानले बताएका छन् । लेकाली क्षेत्रको अलैंची भने कात्तिकदेखि मंसिरसम्ममा निस्कने गर्दछ । – रासस
Previous articleसेल्सबेरी सुपरमार्केटको ठगी धन्दा, एक किलो चिनीमा २० ग्राम ठगी
Next articleहरियो तरकारीको मूल्य छुनै नसक्ने गरी बढ्यो